ओली-प्रचण्ड विदेशीका एजेन्ट हुन्, ओली र प्रचण्डको उल्टो विदेश नीतिले नेपाल बिदेशीको कब्जामा !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
ओली-प्रचण्ड विदेशीका एजेन्ट हुन्, ओली र प्रचण्डको उल्टो विदेश नीतिले नेपाल बिदेशीको कब्जामा !
बिहि, अशोज २, २०७६
भारत र चीन सतर्क- पश्चिमा शक्तिहरुले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन र भारतलाई पनि ईसाइकरण गर्न खोजेका छन् । चीन र भारतले यो कुरा राम्रोसंग बुझिसकेका छन् । यसकारण उनीहरु नेपालमा बढ्दो ईसाइकरण रोक्न चाहन्छन् । नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न भारत र चीन सहमत भैसकेको लुइँटेलको दावी छ ।
कांग्रेस प्रतिपक्षी होइन- आफनै नालायकीका कारण सत्तापक्ष नराम्ररी अत्तालिएको छ । अझ अनौठो त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी भनिएको नेपाली कांग्रेस मौन छ । उसको मौनता रहस्यात्मक छ । एनसेल, वाइडबडी, मेलम्ची जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा कांग्रेस बोल्न सकेको छैन । यसको सिधा अर्थ के हो भने सत्तापक्ष र कांग्रेस यसमा मिलेका छन् ।
पशुपति र लोहनीले छाडनुपर्छ- नेता लुइँटेलले आफनो पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई नेतृत्व छोडेर दोस्रो पंक्तिलाई पद हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।